Ghana Oo Kulan Rabshado Ku Dhamaaday ugu soo gudubtay Finalka Koobka Qaramada Afrika+sawiro+ video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ghana Oo Kulan Rabshado Ku Dhamaaday ugu soo gudubtay Finalka Koobka Qaramada Afrika+sawiro+ video
Xulka qaranka Ghana ayaa u soo baxay finalka koobka qaramada Afrika ee 2015 ee ka socday wadanka Equatorial Guinea. Ghana ayaa guul ay ka gaadhay Equatorial Guinea ugu soo baxday finalka koobka qaramada Afrika, waxayna guushan ku gaadhay 3:0, waxaana goolasha ukala dhaliyay Jordan Aye iyo Andre Ayew oo walalaalo ah halka uu goolka kale dhaliyay Wakaso Mubarak.
Kulankan ayay dhamaadkii ciyaartu noqtay mid ay rabshado hadheeyeen ciyaarta ayaana muddo la joojiyay. Jamaahiirta Equatorial Guinea ayaa ciyaarta qas iyo dhibaato ku abuurtay kadib markii ay arkeen dhamaadkii ciyaarta xulka qarankooda oo tartanka ka hadhaya.ciyaarta ayaa la joojiyay muddo 20-30 daqiiqo ah.Booliska rabshada la dagaalama ayaa jamaahiirta ka hortagay iyaga oo sunta dadka kaga ilmaysiisa ku sii daayay halkay ay sidoo kale gacanta ula tageen.
Xulka qaramada Ghana iyo xulka koobkan marti galinaya ee Equatorial Guinea ayaa iskaga hor yimid kulanka afar dhamaadka koobka qaramada Afrika ee 2015. Ghana iyo Equatorial Guinea ayuu mid kastaaba doonayay inuu u soo baxo finalka koobka qaramad Afrika si uu finalka ula ciyaaro Ivory Coat oo xalay guul ka gaadhay DR Congo.
Ghana ayaa ka mid ahayd xulalka qaramada koobkan loo saadaalinayay halka Equatorial Guinea ay layaab noqotay inay halkan soo gaadho, waxayna si nasiib ah ku soo dhaafeen kulankii Tunisia kaas oo garsoorihii kulankaas dhex dhexaadinayay uu dhamaadkii ciyaarta rekoodhe uu ganaax lix bilood ah ku mutaystay ku abaal mariyay.
Kulankan dhex maray Ghan iyo Equatorial Guinea ayaa ku bilaamay qaab gaabis ah oo ay labada kooxood ku ciyaareen taxadar, waxayna inta badan qaybta hore ahayd mid aan goolal layska dhalinin. Daqiiqadii 41 aad ayaa Ghagana lagu abaal mariyay rekoodhe kadib markii uu goolhayaha E. Guinea ee Ovono uu qalad ku galay Appiah, waxaana rekoodhaas gool u badalay Jordan Ayew, waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Ghana hogaanka ciyaarta kula wareegtay. Goolka uu Jordan Ayew dhaliyay ayaa ahaa goolkii 1500 aad ee tartanka koobka qaramada Afrika.ayew
Ghana ayaa markii ay goolka furitaanka la timid bilawday inay raadsato goolka kalsoonida, waxayna goolka labaad la timid dhamaadkii qaybta hore ee ciyaata waxaana goolkaas u saxiixay Wakaso Mubarak, wuxuuna ciyaarta ubadalay 2:0 ay Ghana hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2:0 ay Ghana ciyaarta hogaankeeda ku haysay.ghana1
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay inta badan markale ciyaartu bilaa goolal ahayd, laakiin Ghana ayaa muujisay tayadeeda, waxayna daqiiqadii 75 aad xulka qarankiisa goolka saddexaad udhaliyay André Ayew kaas oo ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Ghana ku xaaqyso E. Guinea.
Goolkan ayaa Ghana u xaqiijiyay inay u soo baxday finalka koobka aduunka, wuxuuna sidoo kale goolkani niyada ka jabiyay jamaahiirta iyo xulka qaranka wadankooda lagu ciyarayay ee Equatorial Guinea. Waxaana goolka koowaad iyo kan saddexaad kala dhaliya labada xidig ee walaalaha ah ee Jordan Ayew iyo Andre Ayew.
Daqiiqadii 85 aad ayay jamaahiirta Equatorial Guinea bilaabeen inay garoonka walxo ku soo tuuraan halka ay sidoo kale xaalada amaan ee garoonku halis gashay. jamaahiirta Ghana ayaa ka soo kacay halkii ay fadhiyeen waxayna soo daba istaageen goolka kooxdooda kadib markii ay halisi soo foodsaartay, xaalada ayaa sii xumaatay, waxayna arintaasi qasabtay in ciyaarta la joojo.Waxaa la arkayay diyaaraad Helicopter ah oo garoonka gaaf wareegaysay taas oo dareenka qofkasta soo jeedisay
Ciyaartoyda ayaa loo sheegay inay garoonka ku sii nagaadaan kadib markii xaaladooda nabad galyo loo cabsaday, ciyaartoyda ayaana loo sheegay inay garoonka ka ururiyaana dhalooyinka ama quraaradaha lagu soo tuuray.
.Ciyaarta ayaa dib loo bilaabay waxaana la filayay in shantii daqiiqo ee ciyaarta ka hadhsanayd iyo waqtiga dheeriga ah ee ciyaarta lagu daro la ciyaari doono laakiin saacaa ayaa laga dhigay 90 daqiiqo markiibana ciyaarta ayaa la dhamaystiray. Sidaana Ghana ayaa ugu soo baxday finalka koobka qaramada Afrika iyada oo la ciyaari doonta Ivory Coast.